गरिरहेको काम छाड्नुपर्यो ? यसो गर्नुस् | Nepali In Japan
प्राय हरेक जागिरको निश्चित अवधि हुन्छ । तर कसैले करार अवधि समाप्त हुनु अघि नै जागिर छाड्न चाह्यो भने के हुन्छ ? कामको सिलसिलामा आइपर्ने अनपेक्षित कार्यभार, निजी जीवनसँग बेमेल, हिंसा, सहकर्मीसँगको समस्या आदिका कारण बीचमै जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त जागिर नछाडि नहुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेलामा आफूलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा राख्नु भन्दा पार्ट-टाइम कामदारको रुपमा आफ्नो हक के के छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् । तपाईको रोजगारदाताले तपाईलाई जागिर छाड्न दिएन भने के हुन्छ ? आदिबारे बुझ्नुहोस् ।
जापानमा जागिर बीचमै छाड्नु अघि थाहा पाउनु पर्ने कुराहरुः
तपाईसँग जति बेला पनि जागिर छाड्ने कानूनी अधिकार हुन्छ
यौनहिंसा लगायत आकस्मिक अवस्थामा करारको कुनै पनि समयमा जागिर छाड्न सकिन्छ, त्यो पनि कानूनी रुपमै । करारमा सहमति जनाइएको समय अगावै जागिर छोड्नु पर्यो भने पनि तपाईको राजिनामा स्वीकृत गरिन्छ । त्यसैले आफू अनुचित करारमा अड्किए भनेर सोच्नु पर्दैन ।
यो कानून कामदारहरुको शोषण नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न बनाइएको हो । जस्तैः तपाईको काम करारमा सहमति गर्नु भएको भन्दा विल्कुल फरक रहेछ वा तपाईलाई करारमा उल्लेख गरिएकोभन्दा बाहेक अरु काम गर्न भनियो भने करार बीचमै रद्द गर्न सकिन्छ । त्यसैले कानूनी रुपमा भन्नु पर्दा तपाईलाई आफ्नो शोषण भइरहेको छ वा करारको उल्लंघन भयो जस्तो लाग्यो भने जागिर बीचमै छाड्न सक्नु हुन्छ ।
माथि बताइएको परिस्थिति चरम परिस्थिति हुन् । यस्तो अवस्थामा जागिरलाई निरन्तरता दिनु कामदारको लागि घातक हुन्छ । तर पार्ट–टाइम काम गरिरहेका अधिकांश विद्यार्थीमा जागिर छाड्नु पर्ने कारणहरु निजी समस्या हुन्छन् । जस्तैः परीक्षाका कारण समय तालिका व्यस्त हुन वा काम गर्ने वातावरण मन नपर्नु आदि आदि । यी अवस्थाहरु आकस्मिक वा तत्कालै जागिर छाडि हाल्नु पर्ने खालका हुँदैनन् । त्यसैले कार्यस्थलबारे अलि विचार पुर्याउन सुझाव दिइन्छ । कानून अनुसार पनि पार्ट–टाइम कामदारहरुले जागि छाड्नु भनदा २ हप्ता अघि रोजगारदातालाई सूचित गराउनु पर्दछ ।
यद्यपि, तपाईले व्यक्तिगत समस्याले गर्दा करार समाप्त हुन अघि नै जागिर छाड्दै हुनु हुन्छ भने कारणलाई सकेसम्म कम अशान्त बनाउने कोशिश गर्नु पर्छ । तपाईको रोजगारदाताले तपाईको स्थानमा अर्को मानिस खोजेर राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जागिर छाड्नु भन्दा एक महीना अघि जानकारी दिनु राम्रो हुन्छ ।
तपाईको करारमा जागिर छाड्ने अघि न्यूनतम् यति हप्ताअघि जानकारी दिनु पर्छ भनेर लेखेको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सहमति जनाइएको समयसम्म कुरेर मात्रै जागिर छाड्नु पर्दछ । तपाईले करारको बीचमै जागिर छाड्ने हुन्छ भन्ने उद्देश्यले केही रोजगारदाताले सूचना दिनु पर्ने समय लामो राखेको हुन सक्छन् ।
(जागिर छाड्नु भन्दा २ हप्ता अघि सूचना दिनु पर्ने नियम निश्चित अवधि उल्लेख नगरिएको करारको हकमा पनि लागू हुन्छ ।)
करारमा निश्चित अवधि किन उल्लेख गरिएको हुन्छ ?
करार अवधि पहिला देखि नै स्थापित भइसकेका कर्मचारीहरुलाई जागिर छाड्न बाट रोक्नलाई लागि होइन । यो भर्खरै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको लागि भने र ल्याइएको हो । करारले यसमा उल्लेख गरिएको अवधिसम्म तपाईको जागिर सुरक्षित गर्दछ । यो रोजगारदाताले बिना कारण कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्न पाउँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नको लागि हो । करारको लम्बाई कर्मचारीको ट्र्याक राख्ने तरिका पनि हुन सक्छ । जस्तैः कुनै कार्यलयले हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउँछ । त्यसैले वर्षेनी करार गर्ने बेलामा तलब सुविधा बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
प्रशिक्षण अवधिमा जागिर छाड्ने
सामान्यतः रोजगारदाताहरु लामो समयसम्म कम्पनीमा नबस्ने व्यक्तिलाई तालिम दिन पैसा र समय बर्बाद गर्न चाँहदैनन् । त्यसैले आफूले जागिर छाड्न चाहेको बारेमा सकेसम्म चाँडै जानकारी दिनु राम्रो हुन्छ । यस्तो भएमा तपाईसामु चाँडै जागिर छाडेर जाने मौका पनि आउन सक्छ । कम्पनीको लागि उपयोगी बनेपछि जागिर छाड्न अलि कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रशिक्षणको समयमा नै आफ्नो मनाशयबारे नहिच्किचाइकन बताइदिनुभयो भने तपाई अप्ठ्यारो अवस्थामा फस्नु हुन्न ।
राजिनामा कसरी दिने
तपाई जागिर छाड्नका लागि तयार हुनु हुन्छ भने यसबारे हाकिमसँग औपचारिक रुपमा भेटघाट गरेर बताउनु राम्रो हुन्छ । त्यसको एक हप्तापछि हस्त लिखित पत्र बुझाउनु होस् ।
कम्पनीले ठ्याक्कै यस्तै खालको चाहिन्छ भनेर भनेको छैन भने राजिनामा पत्रको नमूना तपाईले अनलाइनमा पनि भेट्न सक्नु हुन्छ । यस्ता खालको पत्रको नुमना यस लिंकमा पनि पाउन सक्नु हुन्छ ।
रोजगारदाताले तपाईको राजिनामा लिन मानेन भने ?
कहिलेकाँही रोजगारदाताले तपाईको राजिनामा लिन नमानेर जागिर नछाड्नको लागि आग्रह गर्न पनि सक्छन् । जस्तैः कहिलेकाँही कार्यालयमा कर्मचारी कम छन् त्यसैले जागिर नछाड्नु भन्ने लगायत अनुरोध पनि आउन सक्छ । यद्यपि, तपाई कम्पनीको क्षतिको लागि जिम्मेवार हुनु हुन्न । करारमा उल्लेख गरेअनुरुप पूर्व सूचना दिइसक्नु भएको छ भने तपाईलाई जान दिने कि नदिने भन्ने निर्णय रोजगारदाताको हातमा हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा जागिर छाड्नुको कारण स्पष्ट रुपमा नखुलाउनु नै उचित हुन्छ । तपाई कार्यस्थलमा सन्तुष्ट हुनु हुन्न भने यसलाई पनि उल्लेख नगर्नु नै वेश हुन्छ । जस्तै तपाईले काम गर्ने वातावरण मन नपरेर राजिनामा दिनएको भनेर भन्नु भयो भने उनीहरुले तपाईलाई वातावरण सुधार्छु भन्ने वाचा गरेर काममा राखिरहन सक्छन् । त्यसैले करार रद्द भएको पूष्टि नभएसम्म कारण गोप्य राख्नु होला । बरु समय मिलेन वा व्यस्तता धेरै भयो भन्ने जस्ता कारण दिन सक्नु हुन्छ । यस्तो गर्नाले रोजगारदाताले तपाईलाई बस्न बाध्य बनाउन सक्दैन ।
कुनै अवस्थामा त रोजगारदाताले तपाईलाई मुद्दा हाल्छु भनेर पनि जागिरमा राख्न खोज्छन् । तर कानूनी रुपमा यस्तो गर्न पाइदैंन भनेर थाहा पाइराख्नुहोला । तपाईले जागिर छाड्दा कम्पनीलाई हुने घाटाको जिम्मेवार तपाई हुनु हुन्न । यस्तो धम्की आयो भने तपाईले स्थानीय श्रम विभागबाट मद्दत लिन पनि सक्नु हुन्छ ।
जापनमा जागिर छाड्ने अधिकारबारे तपाईलाई थाहा छ ?
चरम परिस्थितिमा तपाईसँग जागिर छोड्ने कानूनी अधिकार हुन्छ । तर पनि अधिकांश कम्पनीले कम्तिमा २ हप्ता अगाडि सूचना पाउने अपेक्षा गर्छन् । तपाईले निश्चित अवधिको करारमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ भन्दैमा जागिर बीच्मै छाड्न नमिल्ने भन्ने हुन्न । आफ्नो शोषण भएको छ वा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो जस्तो लागेको छ भने रोजगारतादा वा अन्यसँग सुझाव सल्लाह लिन हिच्किचाउनु हुन्न । यद्यपि, अन्य व्यक्तिगत कारणको लागि भने शुरुआती सम्झौता तोड्दैछु भन्ने कुराबारे सचेत रहनु होला । अनि जागिर छाड्ने क्रममा उचित कदम चाल्न पनि नबिर्सनु होला ।
Prevयि हुन जापानमा आय कर तिर्न ढिलो भयो लाग्ने जरिवाना
Nextजापानमा नेपाली रेष्टुरेन्ट, कुक र डिपेन्डेन्टका लागी अबको बैकल्पिक बाटो